Karazan'orinasa dimy mila marika famantarana manokana sy ny fomba fanaovana famantarana miavaka
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Karazan'orinasa dimy mila marika famantarana manokana sy ny fomba fanaovana famantarana miavaka
Ny famantarana dia singa manampy amin'ny fampitana fampahalalana manan-danja amin'ny olona. Manana azy ireo hatraiza hatraiza. Raha ny tena izy, any amin'ny ankamaroan'ny birao dia manana famantarana maromaro izay milaza amin'ny olona ny toerana halehany sy ny zavatra azon'izy ireo atao amin'ny efitrano sasany.
Manomboka amin'ny marika amin'ny birao ka hatrany am-baravaran'ny trano fidiovana ka hatramin'ny famaritana ny toerana fijanonan'ny fiara aza dia anisan'ny kolontsain'ny birao foana ny famantarana.
Ny famantarana dia mety ho ampahany amin'ny varotrao. Izy ireo dia azo ampiasaina hampahafantarana amin'ny olona ny misy ny orinasanao sy ny asany. Izy ireo dia azo ampiasaina hanentanana ny olona hanao fividianana koa.
Ao ambadik'izany, ny famantarana dia resaka fifandraisana avokoa. Ny fomba tsara hahafantarana raha mila famantarana ao anatin'ny orinasa ianao dia ny manontany tena hoe: “Misy sombim-baovao angatahinay ho fantatry ny olona rehetra ato ve?”Raha ny valiny dia Eny, avy eo dia ilaina ny famantarana matetika ho iray amin'ireo fitaovanao amin'ny fifandraisana.
Raha ny valin'io fanontaniana io dia mety efa mazava fa ny ankamaroan'ny orinasa dia mila famantarana amin'ny fotoana iray.
Koa satria ny orinasa dia mila famantarana ara-dalàna, dia misy dikany ny mandroso lavitra mba hahazoana famantarana manokana. Amin'ny famantarana manokana dia azonao atao ny manisy marika ny mombamomba anao amin'ny fampahalalana tianao hampitaina, na inona na inona lohahevitra.
Reseandohalambo dia naneho fa saika ny 90% -n'ny vaovao novolavolain'ny olona dia azo ara-maso. Nasehon'ny fikarohana ihany koa fa ny olona dia mahatadidy 80% ny zavatra hitany raha ampitahaina amin'ny 10% amin'ny zavatra henony.
Ny marika dia ny fampahatsiahivan'ny olona anao. Raha mampita vaovao ao amin'ny toeram-pivarotanao sy manodidina ny tranonao ianao dia mila famantarana marika marika hanondroana ny mombamomba ny marika. Rehefa ianao mamorona famantarana manokana ho an'ny marikao, mamono vorona roa amin'ny vato iray ianao - miantoka ny fampitanao ny fampahalalana ilaina sy mitazona ny mindshare marika.
Hatramin'ny nanorenanay fa ny orinasa rehetra dia tokony hamorona marika fanao mba hampitombo ny sain'ny mpanjifany, andeha isika hitodika any amin'ireo orinasa mila fambara mahazatra indrindra.
Ny ankamaroan'ny banky dia mahazo fivezivezena an-tongotra be dia be isan'andro. Na ny mpanjifa mitady ny hitaraina na ireo izay mbola tsy nilavo lefona tamin'ny fisintom-bola teo ambonin'ny latabatra dia voatery hanana olona any amin'ny banky foana ianao.
Ny fananana fambara mahazatra any amin'ny banky dia manampy anao hanararaotra ny fivezivezena amin'ny tongotra mba hitazomana ny olona hanaraka ny vaovao rehetra ilainy. Torohevitra tsotra toy ny fisorohana ny hosoka sy ny fahazoana fotoana vaovao dia azo ampitaina amin'ny alàlan'ny famantarana ao anaty trano.
Ireo mari-pamantarana ao amin'ny banky ireo dia manampy amin'ny fampihenana ny andraikitry ny mpiasa izay tsy maintsy nila nampahatsiahivina ireo mpanjifa mitsidika rehetra momba ireo torohevitra ireo. Izy io koa dia mampitombo ny fotoana fiandrasana ho an'ny olona amin'ny alàlan'ny fiantohana fa afaka mifampiraharaha amin'ny tenany izy ireo
Ny fambara amin'ny banky dia azo apetraka akaikin'ny kioska ATM, ao ambadiky ny mpilaza, eo amin'ny rindrina, eo anelanelan'ny tsipika mitondra fiara, ary na aiza na aiza no heverinao fa hitadiavan'ny olona.
Ny trano fisakafoanana koa dia mahazo fifamoivoizana an-tongotra an-tongotra be isan'andro. Na izany aza, ireo isa ireo dia azo ampitomboina bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana famantarana manokana.
Rehefa manomboka trano fisakafoanana ianao, ny zavatra voalohany tadiavinao dia ny fahafantaran'ny olona fa eo ianao. Raha ny marina, ny trano fisakafoanana dia mampiasa ny sasany amin'ireo famantarana ivelany feno fahasahiana sy misarika ny saina amin'ny marketing. Ny fambara mazava sy ivelany dia fanao amin'ny trano fisakafoanana amin'ny ankapobeny. Manampy azy ireo hisarika ny sain'ny mpanjifa mety hitranga izy ireo, hampitombo ny fahitana, ary hampiroborobo ny marika am-parany.
Na kamio sakafo io na trano fisakafoanana misy kintana 5, dia ilaina ny fananana fambara ivelany mahazatra.
Na izany aza, ny trano fisakafoanana ara-batana ihany koa dia afaka manararaotra fambara hanampiana amin'ny fampitana fampahalalana tena lehibe amin'ny mpanjifany. Rehefa misakafo dia mirona hirenireny amin'ny masony ny olona. Ampiasao izany fotoana izany hampianarana azy ireo amin'ny zavatra sasany izay tokony ho fantatr'izy ireo momba ny orinasanao.
Ny famantarana nataonao dia tsy voatery ho fitaovana ara-barotra na varotra-sy toy ny fihenam-bidy. Indraindray ny fizarana ampahany amin'ny tantaran'ny trano fisakafoanana dia mety hanampy koa. Ny fampahalalana toy izany dia afaka manome mpanjifa fahatsapana mahazatra ny marikao, amin'izay dia hampitombo ny fahatokian'izy ireo.
Alao an-tsaina ny fivarotana antsinjarany tsy misy famantarana. Saika tsy ho vita mihitsy ny mahita zavatra ao. Heck, mbola sarotra ny mahita zavatra any amin'ny magazay fivarotana misy soratra.
Atsangano ny tananao raha toa ianao ka mila mangataka fanampiana amin'ny mpanotrona amin'ny fivarotana antsinjarany misy famantarana. Marina izany, tsy maintsy nanao an'izany daholo isika.
Ireo fivarotana antsinjarany dia manamboatra tranga misy fambara mahazatra. Matetika izy ireo dia lehibe loatra ka ny mahita ilay entana tadiavinao tamin'ny fitsidihana voalohany dia mazàna dia raharaha be - ary miaraka amin'ireo famantarana mihitsy aza.
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny olona ho sarotra amin'ny fitadiavana entana ao amin'ny magazay iray dia satria ny famantarana matetika dia famantarana soratra mahazatra. Ny famantarana famantarana ny jeneraly dia tsy ho olana raha tsy samy manana ny famaritana ny zavatra tafiditra ao anatin'ny fanasokajiana ireo orinasa.
Ny fivarotana sasany dia mety aleony mitazona ranon-tsasana fanasana lovia ao amin'ny faritra savony / detergent toy izay hitazona azy miaraka amin'ny fitaovana ao an-dakozia.
Ny famoronana famantarana manokana dia afaka manampy anao hisoroka ny fikorontanana toa ny etsy ambony miaraka amin'ny mpanjifa. Miaraka amin'ny famantarana nataonao marika, dia azonao atao ny mampiditra fampahalalana momba ny tontolo izay manampy ny mpanjifa hamantatra zavatra haingana kokoa.
Ankoatry ny fanampiana ny olona handray fanapahan-kevitra haingana kokoa ao amin'ny toerana misy anao dia azonao atao ihany koa ny mampiasa famantarana manokana hanamafisana ny marikao ao an-tsain'ny mpanjifanao. Raha manana promos ianao na programa fampidiram-bola ho avy izay azon'ny olona araraotina dia fomba tsara hampahatsiahivana azy ireo ihany koa ny famantarana.
Ny tobin-tsolika matetika dia fanapahan-kevitra ratsy iray tsy lavitra ny loza ateraky ny afo noho ny toetran'ny akora amidiny. Noho izany dia ilaina ny manolotra torohevitra momba ny fiarovana ny mpanjifa mitsidika hatrany ny tobin-tsolika.
Miankina amin'ny toerana misy ny tobin-tsolikao, mety mifaninana amin'ny tobin-tsolika hafa ianao amin'ny fivezivezena fiara. Amin'ny tranga toy izany, ny tobin-tsolika dia mety mila famantarana lehibe manintona mpamily. Ilay famantarana dia mety misy koa fampahalalana fanampiny, ao anatin'izany ny vidin'ny lasantsy sy ny tolotra hafa atolotra ao amin'ny tobin-tsolika.
Ny ankamaroan'ny tobin-tsolika koa dia avo roa heny noho ny fivarotana mora. Ny fivarotana fivarotana mora vidy dia manampy an'ireto gara ireto hampitombo ny fandaniam-bolan'ny mpanjifa. Araka izany, zava-dehibe ny fampiasan'ny tobin-tsolika famantarana izay mampahafantatra ny mpitsidika azy ireo ny mahasoa amin'ny fiantsenana miaraka amin'izy ireo.
Fivarotana fikojakojana fiara
Toy ny tobin-tsolika, ny fivarotana fikojakojana matetika dia asa eny an-dalana. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia noho ny toerana misy azy no nahatonga izany. Ireo fivarotana fikojakojana dia napetraka hanomezana fidirana mora amin'ireo tompona fiara mila fanamboarana.
Na izany aza, zava-dehibe ihany koa ny fampahafantarana amin'ny olona ny misy anao sy ny zavatra ataonao. Ny ankamaroan'ny fivarotana fikojakojana dia misy takela-by lehibe lava izay mampita mazava tsara ny zavatra ataony.
Raha mihazona fivarotana fikojakojana ianao dia azonao atao ny mandray an-dàlana iray hafa amin'ny alàlan'ny fampidirana ny anarana sy ny logo an'ireo marika iasanao. Amin'ny ankapobeny, matetika ny olona mahazo aina kokoa amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahaizana manokana izay manana traikefa amin'ny marika entin'izy ireo.
Ahoana ny fanaovana famantarana manokana izay miavaka
Ny fanaovana famantarana mamirapiratra dia siansa toy ny kanto. Na dia tokony mikasa ny hanao endrika kanto sy manaitaitra aza ianao, dia misy toro lalana tsotra tsy hadino fa hanampy anao hisongadina eo amin'ny fifaninanana:
Mampiasà loko marevaka foana: ny loko mamirapiratra mazàna misarika ny sain'ny olona, ​​ary izany no tianao hatao amin'ny famantarana anao. Irinao ny olona hahamarika azy ireo ary hamaky azy ireo. Ny loko toa ny mena, mavo, maitso ary manga dia mazàna no azo alaina amin'ny endrika famolavolana.
Mampiasà marika manerantany: Na dia te-hanamboatra ny fambarao aza ianao dia zava-dehibe ny hitazomana ireo mari-pamantarana manerana an'izao tontolo izao.
Ohatra, raha manandrana manondro loza ianao, dia tsy misy dikany ny mamorona marika vaovao ho azy satria tsy dia takatry ny olona izany amin'ny voalohany fa tsy mifanohitra amin'ny fampiasanao ny karandohany.
Na izany aza, na dia eo aza ny fampiasana famantarana manerana izao tontolo izao, azonao atao ny manisy tsipika kely amin'ireo famantarana hanondroana ny fahaizan'ny marika.
Mampiasà endritsoratra tsotsotra: Ny hany mampanahy ny tena rehefa mifidy ny endritsoratra famantarana fanao dia ny hoe azo vakiana na tsia. Na manao ahoana na manao ahoana ny hatsaran'ny endritsoratra, raha tsy azo vakina izy io dia hanafoana ny tanjon'ilay famantarana.
Na dia azo vakiana aminao aza ny endritsoratra, dia mila mampiditra olona manana fahasembanana mamaky izay mety tsy ho afaka hiteny mora foana ny litera avy lavitra ianao.
Kely kokoa ny: Rehefa mamorona sary an-tsary ianao dia mila mitazona ny fampahalalana ho fohy sy mahitsy hatrany. Ny ankamaroan'ny olona mihaona amin'ny sonia dia mety tsy afaka mandany minitra maromaro hamakiana hafatra lava. Manatsara ny hafatrao mba hahazoanao fahalalana mora.
Ataovy lehibe izany: Arakaraka ny haben'ny famantarana ataonao no mahamora ny famakian'ny olona azy avy lavitra. Famantarana lehibe kokoa mazàna dia manome antoka ny fivezivezena an-tongotra bebe kokoa ary, amin'ny alàlan'ny fanitarana, mpanjifa maro kokoa. Hamarino foana fa ny fampahalalana momba ny famantarana nataonao dia lehibe sy azo vakina mba hovakiana lavitra.